जिल्ला समितिसहित राजपाका जिल्ला अध्यक्ष माओवादी केन्द्रमा प्रवेश
इटहरी । राष्ट्रिय जनता पार्टी सुनसरी जिल्ला समितिसहित जिल्ला अध्यक्ष उमेश साह नेकपा (माओवादी) केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रको इटहरी वडा नं. १७ ले मंगलबार आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश तथा प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा राजपाका १ सय जना नेता कार्यकर्तासहित अध्यक्ष माओवादी केन्द्रमा....
भक्तपुरको चाँगुनारायणमा एमाले विजयी
काठमाडौं । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा नेकपा एमाले विजयी भएको छ । चाँगुनारायणको मेयरमा एमालेका सोम मिश्र ८५१२ मत प्राप्त गरि विजयी भएका छन् । उनका निकतटम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका राजाराम खड्काले ६८६९ मत प्राप्त गरेका छन् । यस्तै, उपमेयरमा एमालेकै बिना बास्तोला ८७७९ मत प्राप्त....
पूर्वमा पनि सुरु भयो कांग्रेस र एमालेको झडप
धरान । धरानमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । धरान–६ स्थित पानबारीमा चुनाव प्रचार–प्रसारका क्रममा दुवै पार्टीका कार्यकर्ताबीच भएको झडपमा एमालेका दुईजना र नेपाली कांग्रेसका एकजना कार्यकर्ता घाईते भएका छन् । एमालेका निराजन थापामगर र अशोक लुङगेली मगरको टाउकोमा चोट लागेको....
आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको प्रमुख....
बराहमा निर्वाचन कार्यालयको उद्घाटन
प्रकाशपुर । सुनसरीको उत्तरी ग्रामिण क्षेत्रमा रहेको बराह नगरपालिकामा सोमबार निर्वाचन कार्यालयको उद्घाटन गरिएको छ । उद्घाटनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुली, मुख्य निर्वाचन अधिकृत अर्जुनकुमार कोइराला, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख जानकी कर्ण, जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र बराह नगरपालीकाका निर्वाचन अधिकृत इन्दीरेस दाहाल लगायत....
एमालेमा २१० जना पार्टी प्रवेश
इटहरी । नेकपा एमाले ४ नं. वडा कमिटिको उम्मेदवारी घोषणा सभामा २१० जना पार्टी प्रवेश गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका क्षेत्रीय सदस्य रमेश दाहालसहित २१० जना युवाहरु अन्य पार्टी परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेको ४ नं. वडामा एमालेका तर्फबाट वडाअध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्र भट्टराईले जानकारी....
निर्वाचनका प्रक्रिया मंगलबारदेखीअघि बढ्ने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सन्चालनमा ल्याएको छ ।
आयोगले सोमबारदेखि ४६१ स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सन्चालनमा ल्याएका हो । कार्यालय सन्चालनका लागि सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत खटाइसकेको आयोगले जनाएको छ ।
भरतपुरको १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान गर्न माग
चितवन । भरतपुर महानगरपालिका वडानम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्न नेपाली कांग्रेस चितवनले माग गरेको छ । मतपरिणामलाई असर पर्ने गरी मतपत्र च्यातिएकाले पुनः मतदान गर्न कांग्रेसको माग गरेको हो ।
कांग्रेस चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठले सोमबार बिज्ञप्ति निकालेर भनेका छन् ‘वडा नं. १९....
सुन्दरहरैंचामा चुनावी रौनक बढ्दै
गोठगाउँ । जेठ ३१ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मोरङको सुन्दरहरैंचामा चुनावी गतिविधि बढ्दै गएको छ । सबै पार्टीले आफ्नो प्रचारप्रसारका कार्याक्रमहरुलाई तीव्र बनाउदै गएका छन् । माओवादी केन्द्र बाहेकका अन्य पार्टीको मेयर पदका उम्मेदवारको नाम सार्वजनीक नभएपनि पार्टीहरुले प्रचारलाई अघि बढाउदै लगेका हुन्....
हार्ने निश्चित भएपछि योजनाबद्ध ढङ्गले मतपत्र च्यातिएको ज्ञवालीको दाबी
चितवन । माओवादी हार्ने निश्चित भएपछि योजनाबद्ध ढंगले मतपत्र च्यातिएको एमाले मेयरका उम्मेदवार देबी ज्ञवालीले दाबी गरेका छन् । यसबारे आफूहरुलाई पूर्वसूचना भएकाले सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी गराएको समेत बताए । जानकारी गराएपनि रोक्नेतर्फ ध्यान नदिइएको उनले आरोपसमेत लगाएका छन् ।
हार्ने निश्चित भइसकेपछि योजनाबद्ध ढंगले....